Nin u shaqeeya Shirkadda Hormuud ee Qaraxa Soobe Loo qabtay & Xog cusub oo laga Bixiyey Qofkuu yahay (Akhriso) | Kalshaale
Nin u shaqeeya Shirkadda Hormuud ee Qaraxa Soobe Loo qabtay & Xog cusub oo laga Bixiyey Qofkuu yahay (Akhriso)
Nov 15, 2017 - 3 Aragtiyood
Muqdisho (Kalshaale) C.wali Ibraahim Gadh-yare oo ah Saxafi Soomaaliyeed, Islamarkaana Mudooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa Gudaha dalka, Una Tartamay Xilal Siyaasadeed ayaa ka hadlay Wuxuu ka yaqaano mid kamid ah dadka loo Qabtay Qaraxii Zoope oo Dawladda Soomaaliya Soo bandhigtay Wuxuu ku bilaabay Hadalkiisa.
Asc df maxay uqarisay ragii gaarka damiinta ka ahaa oo Vila Somaliya kasohagayay @ ñasiib badledahay hadan laiskukaqarxinas
shirkada asago u shaqeeya ayu hadana danahiisa gaarka fulashankara haduu shirkada hormuud u shaqeeyo macnaheedu ma aha inay shirkadu wax qarxiso oo shaqadas u dirsaday
Amaal iyo Muna waan idin salaamay.
Muna, shirkada iyo dadka Mogadisho oo dhan ayaa la shaqeeya argagixisada alshabaab, sababtoo ah, waa laheeystayaal, mana oga sida eey iskaga xoreeyn karaan kuwa afduubka ku heeysta.
Rag lazy yaal ah, ma shaqeeystaal ahna, hadde dowladda dhexe waa kasoo buuxsameen, kuwaas oo aanan haba yaraatee waxba kusoo kordhin, in eey wax ka nusqaamiyaan maahanee dagaalkii dadka iyo dalka looga xoreeynayay argagixisada alshabaab.
dhamaana shirkadaha iyo waliba shaqsiyaaad ayeey lacag ka helaan argagixisda alshabaab, oo ah urur kufaar ah, oo sida maafiyada u abaabulan.
Bilowgii qarniga 20aad, magaalooyinka Boston, iyo New York, waxaa kajirray mafia abaabulan, oo meherad, iyo ganacsi kasta lacag baad ah kasoo aruursada, qofkii aanan lacagtaa bixin iyo dukaankii aanan bixin, waa la qarxin jirray, dadka iska lehna waa ladilli jirray. Bog ayeey xeeladaas kasoo amaahdeed argagixisda alshabaab. Waxeey kaloo soo amaahdeen dhagar iyo xeelado badan. Waxii ka hortagi lahaa, oo caqli lahaana meesha majoogaan.